I-Toy Poodle: Umhlahlandlela Ophelele Ku-Poodle Fluffiest, Cutest & Encane - Izinhlobo
I-Toy Poodle: Umhlahlandlela Ophelele Ku-Poodle Fluffiest, Cutest & Encane
Ngokuvamile kuphutha ngenja yesikhwama sesandla, noma ngisho nebhere eli-teddy , kunokuningi kwiToy Poodle kunokuhlangana okokuqala ngamehlo.
Ukubukeka okuhle, nomzimba olinganiswe kahle, namalokhi amancane agobile , ziyefana ne-Standard Poodle ngaphandle kosayizi wazo omncane.
IToy Poodle uhlobo oluhlakaniphile oluthokozela ukukhuthazeka engqondweni nasemzimbeni.
Le nja ithanda ukudlala izinsuku ezigcwele, ezigqamile ngokugijima, futhi ngesikhathi sasebusuku lolu hlobo luthanda ukuhlala luzigoqile eduze kwabathandekayo.
Kwaziwa ngokuba uhlobo oluphelele lwalabo banikazi abangakhathali ngezikhathi ezithile ze-puppy pamper futhi abakwazi ukuletha lolu hlobo ngokukhuthaza kwabo kwansuku zonke ngokomzimba nangokwengqondo.
Zingaba zincane, kepha lolu hlobo lwezinja luveza ukuthi uma kukhulunywa ngobuhlakani, usayizi awunandaba! Qhubeka nokufunda ukuze ufunde kabanzi ngale Poodle.
Ukubuka konke kwe-Toy Poodle
Imidlwane Yama-Toy Poodle
Ubuntu beToy Poodle
Usayizi We-Toy Poodle nokubukeka
Ukunakekela I-Toy Poodle
Ukuqeqesha I-Toy Poodle
Impela bayinja ethandekayo. Bathanda ukuba eceleni kwakho noma ngabe kungukuhamba ngesivinini, noma phakathi nalezo zikhathi zasebusuku ngomlilo.
I-Toy Poodle inguqulo encane yokwahluka okujwayelekile ngakho-ke igcina zonke izimfanelo ezinhle kakhulu ezinikezwa yi-Standard Poodle.
Kukhethwe ngokukhetha kusuka kumzali osezingeni elijwayelekile, ukuze babe inja ehambisana nayo, babekhethwa ngosayizi wabo omncane futhi onobungane.
Zintathu osayizi abahlukahlukene bama-Poodle konke okwaziwa yiAmerican Kennel Club:
Okujwayelekile (kumi ngaphezu kwama-intshi angu-15)
Encane (emi kuma-intshi ayi-10 kuye kwangama-15)
UToy Poodle omi ekuphakameni okuphezulu kwamasentimitha ayi-10
I-Toy Poodle yakhuliswa ngezinja ezincane ezilinganiselwe ze-Miniature Poodle, ezaziphendulwa zivela ezinhlotsheni ezincane ezisezingeni elijwayelekile.
Ukuze uqonde iToy Poodle, kubalulekile ukuthi uyibhekisise umlando we-Standard Poodle .
I-Standard Poodle ivame ukuvezwa njengenja yaseFrance. Yize lolu hlobo lwaluthandwa kakhulu yi-French Aristocrats , empeleni badabuka eJalimane!
Hhayi njalo kwesinye sezilwane ezifuywa kakhulu, zazaziwa njengezinja 'zezibhamu'.
Lolu hlobo lwalwaziwa njengenja yezemidlalo esebenza kanzima eyayisetshenziselwa ukubuyisa nokuzingela.
Namuhla, le nja yaziwa ngokuba ehlakaniphile ngokweqile, i-hypoallergenic nenhle. Azisetshenziselwa ukuzingela kakhulu, kepha kunalokho zikhethelwa ubuhle bazo nobuchopho!
Ivelaphi I-Toy Poodle?
I-Toy Poodle ivela ezinhlobonhlobo ze-Miniature.
Ukwakha iPoodle encane encane, imidlwane emincane kunayo yonke (kusuka ku-Poodle litters), yakhiqizwa ngokukhetha ngekhulu le-18 eNgilandi.
Ama-Toy Poodle anayo yonke intelezi, ubuhlakani nothando olunikezwa ngumzali osezingeni elijwayelekile, avele eze ngephakeji elincane kakhulu (ama-intshi ama-5 amancane ukuba abe ngqo)!
Izinhlobo zezinja zamathoyizi ziya ngokuya zanda nemindeni yonke i-US nasemhlabeni jikelele; ngakho-ke kungokwemvelo ukuthi le nja ebukhulu beToyi yaduma futhi.
Ulwazi lwe-Toy Poodle
Usayizi Ubuningi obungu-10 ″ buyabuna
Isisindo 6 kuya ku-9 amakhilogremu
Isikhathi sokuphila Iminyaka eyi-12 - 15
Ifanele i- Imindeni, Abangashadile, Abashadile Noma Abadala
Ukuhluka Kwemibala Okumhlophe, Ukhilimu, Amabhilikosi, Okumnyama, Okubomvu, Okumnyama, Isiliva Kanye noPhathi
Isimo Okunempilo, Ukudlala, Ukukhalipha, Ukuthandana, Nokugijima
Amanye Amagama Teddy Poodle, French Poodle, Barbone noma Caniche
Imidlwane emithathu ivame ukuzalwa kudoti wama-Poodle alinganayo amathoyizi.
Isilinganiso udoti kadoti weToyy Poodle mithathu (uhhafu wosayizi kadoti womzali osezingeni elijwayelekile), ngenxa yobukhulu bawo obuncane, umama anganela kuphela amazinyane amaningi esibelethweni sakhe.
Umdlwane we-Toy Poodle empeleni ukuhluka okushibhe kakhulu kwe-Poodle; ngokuvamile kubiza phakathi kwe- $ 1,000 kuya ku- $ 2,000 USD.
Ngaphambi kokuba uthenge imidlwane yakho ye-Toy Poodle, yazi umfuyi wakho ! Lokhu kubaluleke kakhulu njengoba abantu abaningi bangazama ukudlula i-Poodle ehlanganisiwe njenge 'Toy'.
Ukwenza ucwaningo olufanele nokuzikhandla okufanelekile kuzokunika nokuqonda isimo senja yakho nempilo yakho.
Umdlwane wakho uzoba mncane ngokwedlulele futhi ubukeke, nawo anoboya obuthambile, ngakho-ke lungiselela ama-oodle of cuddles!
Ama-Toy Poodles aziwa ngokuba nolaka noma ukuvikela futhi awanawo amafulegi abomvu uma kukhulunywa ngobumnene bawo.
Kodwa-ke, uma bengahlangani kahle, noma uma bencike kakhulu, bangahle bahlushwe amahloni noma ukukhathazeka ngokwehlukana.
Izindawo ezicindezelayo zingatholwa kalula yile nja. Uma ikhaya labo ligcwele ukungezwani, khona-ke bangakubona lokhu futhi nabo bacindezeleke.
Azinazo izingqinamba ezinkulu zokukhonkotha noma zokuhewula. Noma kunjalo, ukuziphatha okungafuneki zingathuthuka uma izidingo zabo ezingokwengqondo nezingokwenyama zingahlangatshezwa.
Lezi izinja ezihambisana nazo, ngakho-ke kuphephile ukusho ukuthi usayizi wazo awusabisi neze. Kodwa-ke, bathatha isikhashana ukugoqela kunoma yibaphi abantu ongabazi; ngakho-ke zama ukwenza izingeniso zibe bushelelezi ngangokunokwenzeka.
Inja edlala ngokweqile ethanda izingane.
I-Toy Poodle iyahambisana nobubanzi babantu nemindeni.
Uma kunjalo kwethulwa kwezinye izilwane ezifuywayo (isb. izinja namakati) , kanye nabantu, khona-ke bangazwana nabo. Noma, lokhu kungathatha isikhashana.
Ukuzibandakanya emphakathini kuyinqubo ejwayelekile edingwa yiwo wonke ama-canine. Inani lokuzihlanganisa nabantu besebancane lizokhombisa ikhono leToy Poodles lokuzihlanganisa ngempumelelo nesikhathi salo sonke sempilo.
Njengoba ziwuhlobo lwezinja olubucayi, kungcono ukuziqapha ngeso lokhozi lapho zidlala nezingane ezincane. Lokhu kwenzelwa ukuthi kungabikho ukulimala okungalindelekile okungenzeka ngesikhathi sokudlala.
Kukonke, iToy Poodle imvamisa ikhula ibe umdlwane onobuntu obuhle futhi othanda abantu; bangaze bathande abantu ngaphezu kwabangane babo abasebenza nabo be-canine.
Ubuntu babo buchazwa njengokuphilayo, ukudlala nokudlala.
Le midlwane kungenzeka ube namahloni kancane ekuqaleni . Lapho nje sebezinze kahle ekhaya labo elisha, ngokushesha baba abangane abangothando.
I-Toy Poodle iyinja enhle kakhulu okusho ukuthi ifanelekile emakhaya amaningi; kusuka emindenini kuya emibhangqwaneni kanye nabantu abakhuthele noma abaphezulu.
Uma nje izidingo zabo zifeziwe, khona-ke lezi zinja zizochuma futhi nobuntu babo obuhle buzokhanya.
Zine-teddy-bear efana nokubukeka ngamehlo amnandi, amancane amnyama kanye nama-curls aqinile.
Lolu hlobo nakanjani lubhekwa njengohlobo lwamathoyizi alinganayo.
Ubungako beToy Poodle busho ukuthi bayaphatheka futhi kulula ukuphatha kancane kunabazali babo abajwayelekile.
I-Toy Poodle Ikhule Ngokugcwele
Ukuba yilungu elincane kunawo wonke emndenini, zime kuma-intshi angama-10 futhi zikala phakathi kuka-6 kuye ku-9lb ( owesilisa unesisindo esithe ukwehla kancane kunowesifazane ).
I-Toy Poodle imane inguqulo encane yenja yePoodle; lokhu kusho, ukuthi bane-build efanayo.
Ukuba nenhloko eyisikwele nomzimba olinganisiwe, onokwakha okuncane nokugijimayo, bangabadlali kakhulu futhi benza kahle ngokugijima.
Izindlebe zabo zishaya phansi ezinhlangothini zekhanda labo, zengeza ekubukekeni kwazo okuhle.
Ukuhlonza lolu hlobo kulula impela , vele ubheke iPoodle (kodwa incane)!
Zingavela ngemibala ehlukahlukene: okumhlophe, ukhilimu, ibhilikosi, onsundu, omnyama, isiliva kanye neToy Poodle ebomvu.
Le nja ibuye yaziwe ukuthi iza nge-parti (okungukuthi kungenzeka ibe ngaphezu kombala owodwa):
Zingaba nombala we-tri parti, futhi zinemibala emithathu!
Izindaba ezimnandi kulabo abanezinto ezingezwani nokwaliwa ngumzimba.
I- I-Toy Poodle i-hypoallergenic ngokweqile futhi ngokulambisa.
Banengubo emfushane emide emide eminyene.
Njengemidlwane, banoboya obuthambile ngokweqile. Kodwa-ke, lokhu kuba yinto eqine kancane njengoba bekhula futhi kudinga ukuzilungisa njalo.
Ijazi lamaPoodle lidume ngekhono lalo lokulungiselelwa kuzo zonke izinhlobo zezinwele ezinhle ze-wacky. Lokhu kungenzeka ukuthi kungani abantu abaningi bethanda lolu hlobo!
Ijazi labo ngumzamo omncane wokuligcina, njengoba ukugaya ijazi lenja yakho ingakhula futhi ingahle ihlanzeke futhi ibe buhlungu.
Zama ukuxubha i-Toy Poodle yakho nsuku zonke noma okungenani njalo ngosuku lwesibili, futhi ungabathatha ukuze basikwe ngokomsebenzi umkhwenyana.
Gcina izinzipho zabo zigundiwe futhi ungakhohlwa ukuhlanza izindlebe zabo ze-floppy. Izindlebe ezingcolile zingase zilume futhi zingakhula zibe ukutheleleka kwezindlebe.
Ukuhlala nje, ungenzi lutho usuku lonke kungakhathaza futhi kungavele kuholele ekuziphatheni okungenasidingo noma okulimazayo njengokuhlafuna noma ukukhonkotha.
Ukunakekela ama-Toy Poodles kungabonakala kunzima kakhulu ngenxa yezidingo zabo zomzimba nezidingo zokuzilungisa.
Kodwa-ke, inja enakekelwa kahle iwufanele umzamo owengeziwe.
Umhlahlandlela Amakholori angama-200
Njenganoma yiluphi uhlobo lwezinja ezincane , ekubeni zincane kunezinhlobo zombili zohlobo lweMiniature nelejwayelekile, ngakho-ke zidinga inani elincane lokudla usuku ngalunye.
Okufanelekile, kufanele uhlukanise okuphakelayo kube ukudla kabili ngosuku ngalunye.
Njengoba ziwuhlobo oluncane, sincoma ukuzondla ngokudla okuphekiwe okuseqophelweni eliphezulu okwenzelwe izinhlobo zezinja zokudlala.
Lokhu kuzoqinisekisa ukuthi inja yakho inikezwa zonke izidingo zawo ezigcwele zamaprotheni, amafutha kanye ne-carbohydrate.
Ungakhohlwa lezo ziphatha! Kungani kungenjalo ezinye izithelo?
Amaminithi Imizuzu engama-45 kuye kwengu-60
Njenganoma yiluphi uhlobo, i-Toy Poodle idinga ukuzivocavoca umzimba ukuze ikwazi ukukhipha wonke lawo mandla ahlanganisiwe.
Kodwa-ke, badinga ukuvivinya umzimba okuncane kunohlobo lwakho olujwayelekile ngenxa yezitho zabo ezincane. Uma uzivocavoca ngokweqile i-Toy Poodle yakho, lapho-ke bangathola ukulimala .
Ngokwesilinganiso, kufanele banikezwe okungenani imizuzu engama-30 yokuzivocavoca okusebenzayo ngosuku. Lokhu kungafaka ukuhamba nezikhathi zokudlala!
Eqinisweni, igama elithi 'Poodle' lisuselwa kupudeln ( igama elisho ukuthi “splash about” ngesiJalimane ) - akumangalisi ukuthi lezi zinja zingabantwana bamanzi.
Lolu hlobo luthanda ukuyobhukuda, mhlawumbe ungabayisa olwandle noma uyongena emfuleni?
Ukuqiniswa okuhle kuhamba ibanga elide lapho uqeqesha noma yiluphi uhlobo lwezinja (kunjalo indlela ephumelela kakhulu yokuqeqesha )!
Noma yiluphi uhlobo lwemivuzo efana nokuphatha noma amathoyizi ahambisana nokudumisa, yilokho nje okudingekayo ukuguqula noma iyiphi i-pooch ibe ngumfana noma intombazane enhle.
Ngenhlanhla, i-Toy Poodle ifana kakhulu ne-Standard Poodle; ngakho-ke kuhlakaniphe kakhulu. Lokhu kusho ukuthi ngeke bathande ukufunda kuphela, kodwa, futhi kuzoba nomoya obaqeqeshayo.
Ngenxa yobuhlakani babo obuphezulu, badinga namazinga akhuphukayo okuvuselelwa kwengqondo. Thatha isikhathi sokudlala imidlalo nenja yakho, bese ubakhipha ohambweni losuku lapho kungenzeka khona.
Zama ipaki yakho yendawo yenja noma izindlela ezihlukile zokuhamba futhi.
I-Toy Poodle ibekelwe izakhi zofuzo ezinkingeni ezifanayo zezempilo njenge-Standard Poodle, lokhu kufaka phakathi:
I-Progressive Retinal Atrophy yisifo samehlo. Amaseli we-photoreceptor esweni ayawohloka ngokuhamba kwesikhathi, okungagcina kuholele ekuphuphuthekeni uma kuyekwa kungalashwa.
Kodwa-ke, uma ubanjwa kusenesikhathi, amehlo enja yakho angagcinwa futhi ukwelashwa kungaphumelela.
Sivela ohlwini lozalo lwe-Standard Poodle, lenja iyadlala , inhle, inothando, inempilo futhi ihlakaniphe ngokweqile.
Ukuqeqesha iToy Poodle kulula, njengoba bethanda ukufunda, okubenza babe nkulu kubanikazi bokuqala.
Ukuzivocavoca le nja kuyinto edingekayo kodwa futhi akukhathazi kakhulu kubaninizo, kodwa, kungahle kube yigugu elincane uma kukhulunywa ngokuzilungisa kwabo.
Umngane ophelele kunoma ngubani ofuna i-hypoallergenic pup ehlakaniphile futhi eqotho, elungele abangashadile, imibhangqwana, imindeni ngisho nabadala; lolu hlobo lufakazela ukuthi izinto ezinhle zingangena ngamaphakeji amancane ... sazise uma ungumnikazi walezi zinja kumazwana angezansi.
I-Komondor Dog Breed Imininingwane nama-FAQ
Izinhlobo Zezinja ZaseJapane: Izinja ZaseJapane Eziyisithupha Zasendulo Nezingajwayelekile
intengo ende kamalusi waseJalimane
ingxube enkulu kangakanani yomgodi wamalebhu ithola
abesifazane abamnyama lab amagama ukuzingela
zihlala isikhathi esingakanani ama-shih tzu poodles
collie german umalusi uhlanganise umdlwane